Sophie Trudeau Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha Kanadha Sophie Gregoire Trudeau Nyaya dzeChidiki Nechekuwedzera Untold Biography Chokwadi
Yedu Sophie Gregoire Trudeau Biography inoratidzira chokwadi pane yake Yehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Murume, Vana, Net Kukosha, Mararamiro uye Hupenyu Hwega.
Mukukosha, Yevacheche-Biography vhezheni yaSophie Gregoire nyaya yehupenyu chaiyo ipfupiso yezviitiko zvakakosha mumakore ake ekutanga, kutanga kubva pairi kusvika pahudiki kusvika paakazova Akakurumbira.
Sophie Gregoire Trudeau's Bio. Tarisai Hupenyu Hwake hwepakutanga uye Kumuka. Credits: NarCity uye FamousPix.
Sophie Grégoire haana kungowana mukurumbira semukadzi wekutanga weCanada. Akazvivakira mukurumbira kuburikidza nebasa rake rekare semuterevhizheni.
Roma, sezvavanotaura, haina kuvakwa nezuva rimwe. Saizvozvo, Sophie akapfuura nemumiedzo yakawanda muhupenyu hwake nyaya asati asvika padanho remukurumbira raanopembererwa nhasi.
Verenga iye Bio kumagumo apo isu tichifukura chakavanzika chekuti akarwara sei nedambudziko rekudya uye nezvimwe zvakawanda zvinonakidza chokwadi.
Sophie Gregoire Zvekuchecheche Nyaya:
Kutanga kubva, Sophie Grégoire Trudeau akazvarwa pazuva re24th raApril 1975 kuna baba vake, Jean Grégoire, naamai vake, Estelle Blais muMontreal, Quebec.
Ndiye chete mwana akazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki. Kufananidzirwa pazasi payo isingawanzo pikicha yaSophie's hudiki.
Makore Ekutanga- Mufananidzo wekukanda mudiki weSophie Grégoire nababa vake.
Sophie ainakidzwa nhambo dzese dzeUdiki uye aivimbisa kuti anochengeta nekurangarira pazviyeuchidzo zvinonyanya kunakidza zveUpenyu Hwake hwepakutanga. Anowanzo kurondedzera mufaro waanotyaira mukuita hushamwari nevamwe vana. Nekudaro, mumaonero ake, Hwana hwake hwaive hunofadza.
Sophie Gregoire Mhuri Kubva:
Kuzvarwa muQuebec hazvireve kuti Mhuri yaSophie Midzi yakabva kuCanada.
Sezvineiwo, chizvarwa chababa vake chakateedzerwa zvizere kuFrance. Ndosaka iye Ethnicity ari wedzinza reFrance-Canada.
Kune rimwe divi, vana baba vaSophie vakabatana zvikuru neCanada. Zvinotoshamisa kuti, yedu inozivikanwa yeCanada celeb yakaratidza chimiro chidiki chechiFrench chine hukama mukutaura kwake.
Chokwadi ndechekuti, Sophie anonyatsogona kutaura Chirungu neFrench.
Yake Yemhuri Yemhuri yakateerwa kuCanada uye zvakajeka yakaderedzwa kusvika Quebec.
Sophie Gregoire Mhemberero Yemhuri:
Little Sophie akaberekerwa mumhuri yepakati-yemhuri Nhoroondo. Semwana mudiki, vabereki vake vakamupa zvese zvigadzirwa zvematoyi zvaakange amboda. Hupenyu hwaiita kunge hwakaenzana kune vechidiki lass avo vaingofunga zvekuita hushamwari nevamwe vana.
Zvinotoshamisa kuti Sophie akashamwaridzana newaaidzidza naye, Michel Trudeau, mwanakomana waiye gurukota reCanada, Pierre Trudeau. Michel anozoguma ave mukwasha wake. Nehurombo, shamwari yake yehucheche Michel akarasikirwa nehupenyu hwake mune avalanche musi wa13 Mbudzi 1998.
Sophie akapedza hwakawanda hwayo Hupenyu hwepakutanga muSainte-Adèle. Nekudaro, mhuri yake yakatamira kunogara kuMontreal kuMount Royal mudhorobha aine makore mana.
Kukura muMontreal, Sophie aigara achijairira kuenda kuchikoro, kuita homuweki yake, uye kutamba nevamwe vana munguva yake yekusarudzika.
Sophie Gregoire Dzidzo:
Kukupa iwe ruzivo rwekuita kwake kudzidza, Sophie aive anoteerera uye akanaka mudzidzi. Akatora zvidzidzo zvake zvakanyanya uye anoda kupinda mune zvemitambo yekunze achiri kuchikoro.
Achienda kuchikoro chesekondari, Sophie akadzidza nesimba paPensionnat du Saint-Nom-de-Marie yakavanzika muOutremont.
Kuti ndikuudze chokwadi, wechidiki weCanada akapedza humbozha hwenguva yake achidzidza nesimba kuti ave mutengesi sababa vake. Asi dzimwe sarudzo dzebasa hadziwanzo kuve dzinokwezva sezvatakazviona pakutanga.
Wedu wekutanga wekuCanada ndiye alumnus wePensionnat du Saint-Nom-de-Marie.
Mukutsvaga kufamba mutsoka dzababa vake, Sophie akanyoresa kudzidza commerce kuYunivhesiti yeMcGill. Izvo hazvina kutora nguva refu pamberi pekuti mukadzi wekutanga weCanada achinje iyo nzira yebasa rake rekutsvaga.
Sophie Gregoire Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Haven akakudziridza hushingi hwekuenda mune rakasiyana basa nzira, Sophie anokurumidza kunyoresa mukufunda kosi inoenderana-yekutaurirana.
Neraki, akarovera Bachelor of Arts degree mukutaurirana kubva kuUniversité de Montréal.
Paakapedza kudzidza kuYunivhesiti, Sophie Grégoire akawana basa rake rekutanga reKubasa semugamuchiri uye mubatsiri mune yekushambadzira femu. Akashanda nesimba kuti azvione achisimuka kune chinzvimbo chakakurumbira chemaneja maneja mufemu.
Mushure mekushanda nefemu kwemakore matatu, Sophie akazotora gwara nyowani mukutsvaga Hupenyu hweKubasa huri nani. Neraki, akawana kumuwana kwake kwechokwadi paakanyoreswa kuti adzidze pachikoro cheredhiyo neterevhizheni.
Sophie Gregoire Bio - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Kushanda munzira yake kukwira manera emukurumbira kwakazove kwakaomarara zvakanyanya kupfuura zvaifungidzirwa naSophie. Pakutanga, akanetseka kubata naBulimia Nervosa, chirwere chekudya aine 17.
Kwemakore matatu, Sophie aifanirwa kutora akati wandei makirasi eyoga uye kurapwa kuitira kuti apore kubva padambudziko.
Panguva iyo Sophie aive nemakore makumi maviri, aive apora kubva pakurwara uye akaenderera mberi nehupenyu hwake. Sezvo nguva ichienderera, Sophie akaenderera mberi nekuvaka chikwereti chake paakawana mabasa akati wandei sekushandira semutori wenhau wevaraidzo wechikamu cheLCC chezuva nezuva che Showbiz.
Sophie Gregoire Biography - Simuka Mukurumbira Nhau:
Hupenyu hwaSophie hwaisazomboramba hwakafanana sezvaakatanga kuitisa dzakasiyana mukurumbira terevhizheni.
Sezvineiwo, Sophie Co-akabata maRadio Canada Kubatsira Ruoko chirongwa uye CKMF Radio mangwanani anoratidza. Kuwedzera pane zvaakamboita pakuita, aive zvakare muvhi we Canal Kunzvenga Escales de Reves uye Canal Z's Teksho.
Anoita zvaanoziva kuita zvakanakisa. Muone achienda kunorarama pachikuva.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora iyi Hupenyu Hupenyu, Sophie haana kungozvinyudza mune rake basa rekuyedza.
Akaratidzawo kuda kwake nyika yake nekuzvibatikanisa mumabasa erudo uye kutora chikamu mukuita kwemasangano asingabatsiri.
Zvinonakidza, mukadzi wedu wekutanga wekuCanada akanyora rwiyo mukuremekedza Martin Luther King, Jr. Day. Akatumidza rwiyo "Kunyemwerera Kwandiri" uye akaiisa pazuva re18th yaNdira 2016.
Mharidzo yake yakamupa rukudzo rwakamira kubva kune vateereri vakamurumbidza nebasa rakanaka. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Unogona kuzvitenda here? Iye neushingi akaimba pana Martin Luther King, Jr. Day.
Sophie Gregoire Hukama Hupenyu:
Mukadzi wedu wekutanga weCanada anga achibatidzana nevarume vaviri chete kubvira paakakwidza Mukurumbira. Pakutanga, aidanana naPatrick Huard, mutambi weCanada asati asangana Justin Trudeau waakazoroora. Tarisa uone mufananidzo wemukomana wake wekutanga pazasi.
Celeb yedu wekuCanada aive nehukama hwekupokana nemutambi ane mukurumbira, Patrick Huard.
Sophie aive asangana Justin Trudeau paakaenda kuchikoro chimwe chete nemunun'una wake, Michel.
Neraki, Sophie naJustin vakasanganazve mu2003 uye vakatanga hukama hwakakomba. Mwedzi mishoma mushure mekufambidzana, shiri dzerudo dzakatora danho rinotevera ndokuroora muchechi yeKaturike muna Chivabvu 2005.
Mufananidzo unofadza wemukadzi wedu wekutanga weCanada anofamba padivi pemurume wake, Justin Trudeau.
Vana vaSophie Gregoire:
Panguva yekunyora iyi Biography, Sophie achiri akaroora Justin Trudeau. Kuroora kwake nemutungamiriri weCanada kwakapa kuti kubereke vana vatatu, anonzi Xavier James, Ella Nyasha, naHadrien.
Haanyari kuratidza vana vake vakanaka nemurume nemurume pachena.
Sophie Gregoire Trudeau Hupenyu Hwemhuri:
Kuzvarwa semwana wega wemhuri yake, Sophie akafarira kutaridzika kwakazara kwevabereki vake. Kuti ndikuudze chokwadi, anonyatsotarisa kuna baba vake naamai vake semuenzaniso wake. Pazasi pane ruzivo rwakadzama pane yega nhengo yemhuri yakawedzerwa.
Amai vaSophie Gregoire Trudeau:
Mumwe haagoni kubatsira asi kuombera amai vaSophie Grégoire nebasa rakanyatsoitwa mukurera mukadzi anoremekedzwa wekuCanada.
Semukoti weFranco-Ontarian, amai vaSophie, Estelle Blais, agara achiisa pamberi kurera mwanasikana wake kuti ave munhu anoremekedzwa pane chero chinhu chipi zvacho.
Kunyangwe iwo marongero ake aive akaomarara, amai vaSophie vanogara vachivimbisa kuti anoshandisa imwe nguva yakanaka nemwanasikana wake.
Sophie Gregoire Trudeau Baba va:
Haisisiri nhau yekuti kukurudzira kwekutanga kwenzira yebasa raSophie ndibaba vake. Nehurombo, aimbove mutambi wepaCanada terevhizheni aisakwanisa kusangana nezvinodiwa nezviitiko zvine chekuita nezvekutengesa sababa vake.
Baba vaSophie Grégoire, Jean Grégoire, aive stockbroker aitarisira kugara kwemhuri yake.
Anogara achitaura rutendo rwake rwakakura kuna baba vake nekumupa ruzivo rwehudiki rwakapfuura rwaaigona kushuvira.
Mufananidzo usingawanzoitika wababa vaSophie Grégoire Trudeau.
Sophie Gregoire Trudeau Vanun'una vake:
Sezvo Sophie ndiye ega mwana wemhuri yake, haana hama kana hanzvadzi. Zvakare, haana kana hama dzekurerwa. Nekudaro, Sophie akagadzira shamwari dzakatora basa rehama nehama pakurarama kwake.
Sophie Gregoire Trudeau's Hama:
Achienda kumadzitateguru ake, sekuru nasekuru vaSophie ndiJacques Grégoire naMadeleine Lampron.
Kune rumwe rutivi, sekuru naambuya vake amai vake vaiva Gerard Blais naAline Lafleur. Kusave nevanin'ina zvinoreva kuti Sophie haana muzukuru kana muzukuru.
Zvakare, vezvenhau uye vezvenhau havana kunyatsoisa pfungwa kuna babamunini namainini vake.
Sophie Gregoire Trudeau Hupenyu hweMunhu:
Saamai, Sophie asvika pakunzwisisa kumatambudziko anotarisana nevakadzi vazhinji nevana munharaunda zvakazara.
Nekudaro, anga achigara akamira semurevereri uye mutauriri akamiririra garikano yevakadzi nevana.
Kuedza kwake kubatsira vakadzi vari munjodzi hakugone kukurudzirwa.
Kure kure nebasa rake rekuita, Sophie mukadzi uyo vanhu vazhinji vaizogara vachirota kuve naamai.
Chikonzero chacho ndechokuti kazhinji akasiya zvimwe zvinhu kuti ave nechokwadi chokuti aunza mhuri yake pamwe chete. Nguva zhinji, Sophie akasiya zvakawanda zvehurongwa hwake nechinangwa chekupedza nguva nevana vake.
Unoziva here?… Sophie anowanzo kuuraya kufinhwa nekutamba panguva yake yemahara. Akazivisa kune vezvenhau panguva yehurukuro kuti anoda kuita Zumba (rudzi rwekutamba).
Uyezve, zvakaoma kutaura nezvezvaSophie zvekuzvivaraidza pasina kutaura Yoga. Sezvineiwo, anodzidzira uye anodzidzisa yoga kazhinji.
Kuona muchidimbu maitiro aSophie.
Sophie Gregoire Trudeau Mararamiro:
Kushanda muindastiri yekutaurirana kwakaburitsa huwandu hwakawanda hwezvinhu zvemari kuna Sophie.
Sezvineiwo, Sophie Grégoire ane huwandu hunofungidzirwa hweMadhora gumi emamiriyoni. Ongororo yemashandisiro ake maitiro inoratidza kuti Sophie anorarama hupenyu hwoumbozha.
Sophie Grégoire Trudeau Imba neMotokari:
Mumweya wekuchengeta mhuri yake pamwe chete, Sophie anogarawo kuimba yemurume wake pa24 Sussex Drive muOttawa.
Hatigone kuramba chokwadi chekuti Sophie anogona kunge aine imba yake uye mota dzemhando yepamusoro. Nekudaro, haatombo taura nezvezvinhu zvake sezvo achivaona sekukanganisa kukuru.
Sophie Gregoire Trudeau Chokwadi:
Kuputira yedu yaSophie Grégoire Trudeau yeHupenyu Hupenyu, hezvino zvishoma zvinoverengeka zvingakubatsira iwe kuona zvishoma zveBiography yake.
Chokwadi # 1: Sophie Gregoire Trudeau Zvemhuri Zvekuita:
Kufadzwa zvizere nebasa rake saamai venguva yakazara, vanhu vazhinji vakabvunza Sophie kuti anoshandisa sei nguva yake nevana vake. Mukupindura kuda kuziva kwevanhu, amai veCanada vakapindura kuti vanowanzo bhasikoro kana kufamba nevana vavo kuenda kunochengeta masikati.
Akataurawo kuti nzira yaaimboita nguva yechando kutora vana vake kunodzora uye kutamba muchando. Panhambo dzinoverengeka, Sophie anowanzoita nguva nemurume wake nevana vachigadzirisa mapazuru.
Chokwadi # 2: Sophie Gregoire Trudeau's Corona Saga:
Muna Kurume 2020, Sophie Grégoire akave wechi158 weCanada kuti ayedze kuongororwa kweCorona Virus. Pasina kupambadza nguva, iye nemhuri yake vakapinda mazuva gumi nemaviri kuti vadzivise hutachiona. Neraki, Sophie akazivisa musi wa 14 Kurume 28 kuti akange apora zvakakwana kubva kuhutachiona hwehutachiona.
Chokwadi # 3: Chitendero chaSophie Gregoire:
Mukadzi wedu wekutanga wekuCanada agara achitarisa kururamisira uye kusarongeka munharaunda. Ndingati kutenda kwake kwechitendero kwakapa mugove wakaringana wehunhu hwake.
Kana iwe usati waziva, Sophie muKristu. Iye nemurume wake vakaita mhemberero yavo yemuchato muchechi yeKaturike. Sophie pasina mubvunzo akarera vana vake mukutenda kwechiKristu.
Pazasi pane wiki ruzivo-base rweSophie Grégoire Trudeau Biography. Tafura ichabatsira kwazvo iwe kuwana ruzivo nezvake. Tsvaga pazasi.
Zita rizere: Sophie Grégoire Trudeau
Nick Zita: Sophie Gregoire
Zuva rekuzvarwa: 24th April 1975
Nzvimbo yekuzvarirwa: Montreal, Quebec
Baba: Jean Grégoire
Amai: Estelle Blais
Mumwe: Justin Trudeau
Vana: Xavier James, Ella Nyasha, naHadrien.
Net Worth: $ Miriyoni 10
Hobbies: Yoga, Kutamba uye Skating
kukwirira: 1.73m - in metres
5 '7' - netsoka
Iwe neni hatigone kuramba chokwadi chekuti tarisiro yaSophie yekuunza mhuri yake pamwechete inonakidza. Kazhinji vashoma vanozivikanwa muzana ramakumi maviri nemakumi maviri vakwanisa kuchengeta mhuri dzavo pamwe chete pasina hurukuro dzekurambana dzinobhururuka mudenga. Asi mukadzi wedu mukuru wechiCanada akazviita.
Nokudaro, tinokwanisawo kudhonzera mhuri yedu pamwechete uye togara murunyararo kana takasarudzawo kuita semusimboti wemba yedu.
Pose patinopa ngwariro kuupenyu hwemhuri, tingaguma tazvipinza isu timene navadiwa vedu mumukurumbira wakakwirira zvikuru usingafungidziriki.
Tinokutendai nekuverenga kwedu Sophie Grégoire Trudeau Childhood Nhau uye Untold Biography. Isu tinogara takavhurwa kune ako maonero pane edu zvinyorwa. Nekudaro, tisiye isu chirevo nezve kugutsikana kwako. Chekupedzisira, taura nesu kana iwe ukawana chero chinhu chinoita senge chakakodzera mune yedu Sophie Grégoire Hupenyu Hupenyu Nyaya.